CPU तापमान - तपाईं निगरानी गर्न चाहनुहुन्छ कि एक धेरै महत्त्वपूर्ण सूचक। कम्प्युटर को सामान्य सञ्चालनको इच्छित तापमान सीमा संग पालन बिना प्रत्याभूति छ, र प्रोसेसर पूर्ण असफल हुन सक्छ। अगाडि-पीसी प्रयोगकर्ताहरूले CPU तापमान कसरी थाहा को प्रश्न मा रुचि। तर क्रममा सबै बारे।
प्रोसेसर तापमान मापन कार्यक्रम
विन्डोज असम्भव नियमित हालतमा गहिरो निदान उपकरण गर्छन्। त्यो छ, तापमान निर्धारण गर्न को CPU को , तपाईं मात्र तेस्रो-पक्ष सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। लागि सबैभन्दा सुविधाजनक कार्यक्रम को CPU को तापमान नाप्ने HWMonitor छ। प्रोसेसर को तापमान निर्धारण गर्न साथै, कार्यक्रम जो आफ्नो निपटान मा छ ती chipsets, पहिचान तापमान सेन्सर, र त्यसपछि आफ्नो तापमान फिक्स। यो कम्प्युटर स्थिर छ भने, गुणस्तर उपकरण, को घटक को तापमान को त्यसपछि लगातार अनुगमन स्थापित छ टिप्पण लायक छ - एक वैकल्पिक प्रक्रिया हो। तर महिना को एक जोडी एक पटक रोकथाम लागि, तपाईं एक नजर लाग्न सक्छ।
अब हामी त्यो निर्धारण गर्छन् कसरी कुरा गरौं प्रोसेसर तात्दै छ। "इंटेल" र "AMD" - दुई प्रमुख कम्पनीहरु प्रोसेसर बजार मा सञ्चालन भन्ने तथ्यलाई सुरु गरौँ। यी दुई कम्पनीहरु को प्रोसेसर आफ्नो संरचना, भोल्टेज र आवृत्ति भिन्न। यो सीधा असर तापमान नियन्त्रण प्रोसेसर को। त्यसैले, हरेक कम्पनी आफ्नो दायरा, आदर्श मानिन्छ जो दाबी। खैर, प्रोसेसर, "इंटेल" माल "AMD" भन्दा ठूलो हदसम्म गरम छन्।
को के हो प्रोसेसर को काम तापमान?
यो पनि CPU तापमान लोड आधारमा भिन्न बुझे गर्नुपर्छ। , कि यो डाउनटाइम को क्षण मा न्यूनतम हुनेछ छ। हामी दुई कम्पनीहरु प्रोसेसर उत्पादन गर्ने लिन भने, कि दुवै उत्पादनहरु लागि निष्क्रिय समयमा तापमान नाघ्न हुँदैन 50 डिग्री सेल्सियस। यो उच्च हो भने, CPU उपयोग ग्राफ शून्य नजिक हुँदा, त्यसपछि सम्भवत, प्रोसेसर को ठंडा सम्हाल्न सक्दैन। समयमा यस CPU लोड गर्न 70 डिग्री माथिको खुसीले गदगद हुनुपर्छ। को CPU तापमान, जो शिखर छ तपाईं कसरी थाहा छ? धेरै बस, तपाईं आफैलाई प्रदान निर्देशनहरू familiarize गर्नुपर्छ। तपाईं तापमान निर्माता नाघ्यो कि पाउन भने, तपाईं ठंडा सिस्टम प्रतिस्थापन बारेमा विचार गर्नुपर्छ।
को CPU तापमान तपाईं कसरी थाहा छ? यो प्रश्न पनि overclockers (- overclocked प्रोसेसर को आवृत्ति मा बाध्य वृद्धि संलग्न मानिसहरू) bothers। गर्न त हामी आफ्नो निपटान मा विशेष गरी किनभने आधुनिक CPUs छ सिफारिस छैन, दुई वा बढी कोर, प्रदर्शन को एक उच्च स्तर प्रदान सक्षम। तर तपाईं overclock निर्णय भने, मानक शीतलन प्रणाली, तपाईं पर्याप्त छैन। यो पानी सिस्टम ध्यान सिफारिस गरिएको छ, तिनीहरूले हावा भन्दा एक उच्च दक्षता छ। कूलर हुनत उपलब्ध र सभ्य हावा ठंडा को खण्ड मा विकल्प छन्।
म अब तपाईं कुनै पनि समस्या बिना बाहिर प्रोसेसर को तापमान पाउन सक्नुहुन्छ र तिनीहरूले उत्पन्न भएमा ठंडा समस्या समाधान गर्न लाग्छ।
बुलेट, संख्यात्मक, बहु शब्द मा सूची: कसरी बनाउन
कसरी आफ्नो कम्प्युटरबाट Java हटाउन? सजिलो!
कसरी भिडियो संगीत कटौती गर्न?
स्थिति सापेक्ष - यो के हो? विस्तृत विवरण
एक pinched स्नायु
"Gaupsin": प्रयोगको लागि निर्देश र प्रयोगको सुविधाहरू
के तपाईं घरमा ferrets को हेरचाह गर्ने बारे थाहा छ?
"Progesterone": प्रयोगको लागि निर्देशन वास्तविक
रबर तलवों संग धेरै व्यावहारिक जूता
अपरिचित गणतन्त्र र आंशिक बुझे। संसारमा कसरी गणराज्यहरु अपरिचित?
शहर होटल "मखमली ऋतु" सोची "क्याथरीन चौथाई।" समीक्षा र फोटो